I-Node.js / npm / Umqambi ongenazimpande > UVielhuber David
I-Node.js / npm / Umqambi ongenazimpande08
Ngo oludala iposi blog Ngachaza ukuthi ukusingatha Node.js mahhala usebenzisa Heroku . Manje ngizokukhombisa indlela ongayifaka ngayo i-Node.js , npm ne- Composer kunoma yikuphi okunye okwabelwana ngakho ngaphandle kwamalungelo empande ngemigqa embalwa yekhodi. Ngayo ungafaka amaphakheji, usebenzise izinhlelo zeVue.js noma vele uqale iseva ye-Express.js. Sihlala sisebenza enkombeni yomsebenzisi futhi sisebenzisa i- nvm - iNode Package Manager.
Kubalulekile ukuqinisekisa kusengaphambili ukuthi umqambi ne-node akutholakali nokuthi imigqa elandelayo ayikhiqizi lutho:
Okokuqala sibeka ukuguquguquka kwemvelo kwesikhashana esizokudinga ngokuhamba kwesikhathi. Ukwenza lokhu, sinquma umkhombandlela womsebenzisi womsebenzisi (imvamisa ~ /, kwezinye izikhungo ezabiwe futhi / www / htdocs / xxxxxxx /) kanye nenguqulo ye-PHP oyifunayo (ngokwesibonelo nomhlinzeki i- All-Inkl / usr / bin / php72, ene- DomainFactory / usr / yendawo / bin / php7-72LATEST-CLI):
Manje sesiqinisekisa ukuthi inguqulo yakamuva ye-PHP isebenza kukhonsoli. Ukwenza lokhu, sakha ifolda entsha enkombeni yasekhaya, sakha isixhumanisi esithambile bese sengeza umkhombandlela ekuqaleni kwe-PATH.
Manje sifaka umqambi womhlaba wonke ngokulanda, ukuhlola nokwenza iskripthi sokufaka, bese sifaka i- composer.phar enkombeni yomsebenzisi bese senza i-symlink futhi:
Sisebenzisa i-nvm ukufaka i-Node.js. Lo ngumbhalo we-bash osebenzela ukushintsha kalula phakathi kwezinguqulo ze-node. Sisebenzisa impahla lapha efakwe i-Node.js ngaphandle kwamalungelo ezimpande:
Ukulungiswa okuncane ku .bashrc kwakudingeka kimi:
Manje sesingafaka futhi sisebenzise inguqulo yamanje ezinzile yeNode.js:
Ngosizo lwe-nvm futhi singashintsha kalula izinhlobo.
Ngikwazile ukwenza zonke lezi zinyathelo nabanye abahlinzeki bokubamba okwabiwe baseJalimane ngaphandle kwezinkinga. Abanye abaphathi banezinkinga ngama-symlinks, kepha i- aliase nayo ingasiza . Isibonelo, i-.bashrc elandelayo iyasiza nge-DomainFactory:
Kukhona nezinkinga lapho ufinyelela / proc / stat ezindaweni ezingokoqobo / ezabiwe, yingakho i-node function os.cpus (), ngokwesibonelo, ibuyisa undefined esikhundleni senombolo eyiyo yama- cores . Lapho ufaka amaphakheji ka-npm lokhu kuholela kumilayezo yephutha efana nokuthi "Awukwazi ukufunda ubude bempahla 'bungachazwanga". Ngakwazi ukuxazulula inkinga ngokusebenzisa inguqulo yamanje Node.js (isb 11.15.0) okuyinto kubhekwane nale nkinga.